‘चार्लिन च्याप्लिन २’ नेपालमा, किन आए त ? « Ramailo छ
‘चार्लिन च्याप्लिन २’ नेपालमा, किन आए त ?
‘चार्ली चाप्लिन २’को नामले चर्चा कमाएका राजन कुमार नेपाल आएका छन् । दोस्रो चार्ली चाप्लिनको रुपमा ४ हजार शोज र १२ हजार घण्टा लाइभ प्रस्तुति गरेर गिनिज बूक र लिम्का बूकमा विश्व रेकर्ड राखेका उनि, आफु अभिनित फिल्म ‘नमस्ते विहार’को प्रमोसनमा नेपाल आइपुगेका हुन् । उनले अभिनयमा डेब्यु गरेको फिल्म ‘शेहर मसीहा नही’ थियो ।
‘नमस्ते विहार’को बारेमा बोल्दै उनले नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग लिंकअप राख्नु पनि मुख्य योजना रहेको बताए । ‘यो फिल्मले विशेष गरि पत्रकारिता क्षेत्रमा आवद्द व्यक्तिहरु छोएको छ । मेरो भूमिकाको बारेमा भन्नु पर्दा, फिल्ममा मेरो नाम ‘डब्लु’ छ । जो जाँगरिलो, निडर र राम्रो सोचाइको व्यक्ति हुन्छ । कुनै नराम्रो संगतले उ अपराध गर्दै माफिया समेत बन्न पुछ । तर, पनि उसले आफ्नो नैतिकतालाई बिर्सेको हुँदैन । जसको कारण उसलाई मान्छेले सम्मान गर्न छोड्दैनन ।’ उनले भने ‘मेरो भूमिकाले पक्कै पनि मनोरंजन दिनुका साथै समाजमा केहि शिक्षा पनि दिनेछ ।’